Mayelana NATHI - ISANXIA
Amabhizinisi aphezulu embonini yoqweqwe lwawo laseChina.
Enye yezisekelo ezinkulu zokubumba zokupheka e-Asia.
Ibhizinisi elikhulu kakhulu lokukhiqiza le-cast iron cookware emhlabeni.
Ngaphezu kwamamitha-skwele ayi-2000 wesikhungo sokuhlola sokuhlola siqinisekiswe yi-CNAS.
ISANXIA yasungulwa ngonyaka we-1998
ibhizinisi lokukhiqiza elihlanganisa i-R & D ezimele, ukwakhiwa kwezimboni, ukukhiqizwa kwesikhunta, ukukhiqizwa komkhiqizo, ukulawulwa kwekhwalithi nokumakethwa kwama-cookware. Inendawo yokugcina impahla ephezulu yensimbi yokupheka insimbi emhlabeni futhi futhi iyibhizinisi lokukhiqiza elikhulu kunawo wonke emhlabeni.
Isikhathi eside, iSANXIA ibilokhu ihlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo zamaphrojekthi we-OEM wamakhulu amakhasimende adumile emhlabeni jikelele. Amashumi ezinkulungwane zokubunjwa abone inqubo yokubambisana phakathi kwethu nemikhiqizo esezingeni lomhlaba. Imikhiqizo ithengiswa kakhulu emazweni angaphezu kwama-30, njenge-United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Japan, South Africa, njll, futhi ivolumu yokuthekelisa ibilokhu ingowokuqala embonini yezitsha zokupheka zensimbi I-Asia.
Imikhiqizo yakwaSANXIA iphelele ngezigaba, kufaka phakathi uwoyela wemifino ekhishini lensimbi, ikhishi loqweqwe lwensimbi, uhlobo olusha lokuphotha izitsha zekhishi zensimbi, izinto ezihlanzekile zensimbi engagqwali, njll, imbiza yokubhaka, imbiza yesobho, ipani lokuthosa, ipani lokubhaka nezinye izinto zokupheka. Yonke imikhiqizo isidlulile isitifiketi sobungcweti se-FDA ne-European Union LFGB, futhi ijabulela idumela eliphakeme nokuthandwa emakethe yomhlaba.
I-SANXIA igxile ocwaningweni lobuchwepheshe bemikhiqizo nentuthuko kanye nokwakhiwa okusha, ngamathimba angama-R & D ayi-130 nezinkulungwane zabasebenzi bezobuchwepheshe. Kuyo yonke le minyaka, ifunde ngokuqhubekayo isipiliyoni somhlaba, yethula imishini ehamba phambili emhlabeni, ubuchwepheshe obuphambili obuphambili, ezenzakalelayo ezithuthukisiwe nezinga lokukhiqiza elihlakaniphile, futhi inemigqa eminingi yokuphonsa othomathikhi ye-DISA, imigqa yemikhiqizo kawoyela yemifino Imigqa ehlukahlukene yokukhiqiza koqweqwe lwawo nokunye ukukhiqizwa kochwepheshe nemishini yokuhlola.
Umugqa wokukhiqiza wokuncibilikisa weSANXIA unekamelo lokuqapha lensimbi elishisayo eliphambi kwesithando somlilo ukulawula ikhwalithi yezinto zokusetshenziswa ngesikhathi sangempela, ukuqinisekisa ikhwalithi kanye nokuzinza kwenqubo yokusakaza, nokufeza ukukhishwa kukadoti oqinile ongcolile ngodoti oqinile osezingeni eliphakeme uhlelo lokwelashwa, okuyimpumelelo yokuguqula umkhakha wokulingisa.
Njengenkampani ehamba phambili embonini yensimbi yabalingisi, sinemigqa engu-6 yokuthuthuka okuzenzakalelayo kakhulu kwe-DISA, izinga lokuzenzekelayo lifinyelela ngaphezulu kuka-98%. Ukusebenza kwayo okuzinzile nokwethembekile kuyisiqinisekiso esinamandla sokukhiqizwa kwemikhiqizo esezingeni eliphakeme.
I-SANXIA ukugaya okuhle kuhlanganisa ukuzenzakalela nomsebenzi wezandla, ukusakazwa kudlulisa izikhukhula zamazinga wokuhlola, kwenza ukunamathela kwengubo yembiza kube namandla, kuqinisekiswe ukuthi umkhiqizo uqinile futhi muhle.
I-SANXIA ivumelanisa nemishini yokulwa nokugqwala ephucukile enamasosha, ihlola ubuchwepheshe obusezingeni eliphakeme, futhi iyasebenzisana namabhizinisi angaphambili omhlaba wonke ukwakha umugqa wokukhiqiza ukwelashwa kokushisa. imikhiqizo inezici ezinhle kakhulu zokulwa nokugqwala nokulwa namachibi ngokwelashwa kwendawo ngaphambi kokufafaza nokugcwalisa igebe lobuchwepheshe bokulwa nokugqwala kwemboni yensimbi yensimbi.
Imigqa yokukhiqiza uwoyela ngobuchwepheshe enenqubo yokukhiqiza ephephe ngokuphelele, ungathinti noma iyiphi ikhemikhali eyingozi, uwoyela wemifino wanezelwa kuphela ukuvikelwa okukhethekile.Kuneminyaka eminingi yesipiliyoni nokuthuthuka, iSANXIA idala ubuchwepheshe obukhethekile be "Super Oil Finished", obuhlukile imibala nezindawo imikhiqizo kawoyela isiza impucuko yezimboni ibuyele ebuhleni bemvelo.
Ngokuzayo, iSANXIA izoqhubeka nokuhambisana nezikhathi, iphishekele ukwaneliseka kwamakhasimende ngobuchwepheshe obusha kanye nokuqanjwa komkhiqizo.
i-Cast Iron Skillet enamanzi, uNamel Skillet, I-xtreme Iron Skillet, eqanjwe i-Cast Iron Skillets, I-Iron Iron Skillet, i-Iron Iron Skillet engathinti,